Mesh Hexagonal Wire
Galvanized Silig Hexagonal Mesh
PVC mesh Silig mesh
Alxanka Wire mesh
Galvanized Alxanka Wire mesh
Xayndaabka mesh Wire
Xayndaabka Xidhiidhka Silsiladda
Feerka Rakibaadda Silsiladda
Alxanka Gabion Box
Sanduuqa Gabion Hexagonal
Cage Crate Cage
Waa Maxay Cabirka Siliga Digaagga Aan Isticmaal?
Siligga digaaggu wuxuu ku yimaadaa qiyaaso kala duwan. Guages ​​waa dhumucda siligga ee ma aha baaxadda godka. Cabiraadda oo sarreysa, ayaa siligga dhuuban. Tusaale ahaan, Waxaad arki kartaa 19 silig oo cabbir ah, siligani wuxuu noqon karaa qiyaastii 1mm dhumucdiis. Haddii kale waxaad arki kartaa 22 silig Gauge, oo noqon kara appr ...
Sida loo doorto dhexroorka cabbirka siligga Digaagga?
Siligga digaaggu wuxuu leeyahay cabbirro kala duwan. Guage micnaheedu waa dhumucda siligga ee ma aha xajmiga godka. Cabiraadda hoose, dhumucda siligga. Tusaale ahaan, 19 silig oo cabbir ah, siliggu wuxuu noqon karaa dhumucdiis 1mm. Haddii kale waxaad arki kartaa 22 silig Gauge, oo noqon kara qiyaastii 0.7mm dhumuc weyn ...
Waxaan joognaa Bandhigga
Waxaan joognay bandhigga Batimat si aan u tusno mesh silig laba geesle ah, mesh silig alxanka leh, mesh silig isku xirka silsiladda, xayndaabka beerta, iridda beerta dhammaan saaxiibbada adduunka oo dhan. Alaabtayadu aad bay caan ugu ahayd bandhiggan.
Farqiga u dhexeeya mesh silig laba geesle ah iyo mesh silig laba geesle ah oo culus?
Shabakadda hexagonal ee culus ayaa ka samaysan silig bir ah oo galvanized ah ama silig bir ah oo dahaarka leh. Mesh -ku waa laba geesle, dhexroorka siliguna wuxuu ka sarreeyaa 2.0 mm iyo ka hooseeya 4.0 mm. Waxaa la tolay oo soo saaray mashiin gabion toosan oo culus. Waxaa guud ahaan loo isticmaalaa kaydinta biyaha. Mashruuca ayaa la dhigay ...
Ma taqaanaa sida aan u adeegsan karno mesh silig laba geesle ah?
Mesh silig laba geesle ah waxaa loo isticmaali karaa mesh silig ah oo loogu talagalay digaagga iyo bakaylaha, oo ka samaysan silig bir bir-kaarboon leh, oo leh qaab mesh adag iyo dusha siman. Waxaa si weyn loogu adeegsadaa dhismaha warshadaha iyo beeraha sidii xoojin iyo gubid. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa sidii ood loogu talagalay baqashada digaagga, fi ...
Ma taqaannaa waqtiga adeegga ee xayndaabka beerta?
Sababtoo ah xayndaabka xayndaabka wadaagga ah ayaa loo adeegsadaa jawi qoyan, daxalka iyo daxalka ayaa lama huraan dhici doona. Mudo intee leeg ayaa la isticmaali karaa guud ahaan? Waxyaabaha samaynta xayndaabka beerta & xayndaabka lo'da guud ahaan waxay leeyihiin silig galvanized koronto, silig galvanized kulul, dahaarka birfan Galfan, 10% aluminium zinc al ...
Codsiga Panel Welded Wire mesh
Guud ahaan, waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa warshadaha iyo beeraha maxaa yeelay waxay leeyihiin faa iido guud oo ah iska caabinta daxalka, aashitada wanaagsan iyo iska caabinta alkaliiga iyo nolosha dheer. Intaa waxaa dheer, xayndaabka badbaadada, ubaxyada iyo xayndaabka dhirta ayaa laga sameeyay midabbo kala duwan oo budada PVC ah oo lagu buufiyay dusha ...
Waa maxay mesh silig laba geesle ah
Mesh silig hexagonal waa mid ka mid ah mesh silig leh dalool laba geesle ah. Noocan mesh silig laba geesle ah waxaa lagu tolay silig bir ah, silig bir kaarboon hoose ah ama silig bir ah Daaweynta dusha sare waxay noqon kartaa galvanized koronto (sidoo kale loo yaqaan galvanized qabow), kulul galvanized Haddii aad doorato di kulul ...
Aqoonta mesh silig alxanka
Mesh silig alxanka waxaa lagu xardhay silig bir ah, silig bir kaarboon. Godka mesh waa afargeeste. Daaweynta dusha sare waxay noqon kartaa koronto galvanized, galvanized kulul la geliyay iyo dahaarka PCV. Ka-hortagga miridhku ugu fiican waa shabakad silig alxanka dahaarka leh ee PCV. mesh silig alxanka, waxaa loo qaybin karaa mesh silig alxanka ...
Bandhiggu aad buu muhiim ugu yahay shirkadeena
Bandhigu aad buu muhiim ugu yahay shirkadeena.Waxaanu ka qaybgalnaa bandhigga ku dhawaad ​​sanad walba.Here waa mid ka mid ah bandhiggii aan ku biirnay Waxaan joognaa Batimat 4 ~ 8, Noofambar, 2019 BATIMAT, oo ah bandhig -dhisme laba -sanole ah oo ka dhaca Paris, France, waxaa soo qabanqaabiyay Kooxda Bandhigga Reed, oo si guul leh u qabatay 30 ...
KU SOO DHAWAADA WADA TASHI
POSTS -KA DHAWAAN
No.29, Wadada Taihua, Shijiazhuang, Shiinaha